Madaxweyne Muuse Biixi Oo Amar Faray Golihiisa Wasiirrada Oo Joog Iyo Jiifba U Diiday, Ujeedada Amarkaasi Iyo Natiijada Ka Soo Baxda Oo Keeni Doonta Isku-Shaandhayn Ballaadhan
Saturday September 29, 2018 - 21:33:11 in Wararka by Super Admin
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay in uu dhawaan shirka Golaha Wasiirrada ee Khamiislaha ah xubnaha Golihiisa wasiirrada ku amray in ay degdeg u soo gudbiyaan war-bixin dhammays tiran oo la xidhiidha wax-qabadkoodii mudadii ay xilka hayeen.
Ilo-wareedyo Xog-ogaal ah oo u dhuun daloola qasriga Madaxtooyada Somaliland ayaa xaqiijiyey in Madaxweynuhu xubnaha Golihiisa Wasiirrada ku war-geliyey in ay soo gudbiyaan wax-qabadkii mudadii ay xilka hayeen taasi oo markiiba keentay in qaar ka mid ah Golaha wasiirradu safarro kormeer iyo shaqo ah ku gaalaa bixiyaan degmooyinka iyo Gobollada dalka.
Masuuliyiintan ayaa intooda badani waxa ay isku diyaarinayaan in mid kastaa soo gudbiyo warbixin uu nafta dul dhigo si uu ugu yaraan uga badbaado hadal hayn iyo xan hoose oo sheegaysa in Madaxweynuhu maaggan yahay Isku-shaandhayn xooggan oo uu seeftiisa kula dhex qaado Golaha xukuumaddiisa oo sida la sheegay uu saluug weyn ka qabo qaarkood.
Ilo-wareedyadan ayaa waxa ay tibaaxeen in la filayo natiijada ka soo baxda soo gudbinta wax-qabadka xukuumaddu ay soo dedejiso isku shaan-dhayn la filayo in Madaxweynuhu Golihiisa xukuumadda ku sameeyo inta aanu sannadkani dhammaan, arrintaasi oo ah midda wadnaha farta u saaraysa xubno badan oo Golaha Wasiirrada ka mid ah oo walaac weyn ka qaba in seefta isku shaan-dhayntu sahayato.
Maalmihii ugu dambeeyey waxa warbaahinta lagala socdaa wasiirro iyo madax kale oo xukuumadda ka tirsan oo u muuqda kuwo dardar galiyey hawlaha shaqo ee ay qaranka u hayaan waana arrin ka dhashay amarka Madaxweynuhu ku bixiyay in loogu gudbiyo wax-qabadkoodii mudadii ay xilka joogeen.
Lama oga wakhtiga ay qaadan doonto mudada ay golaha xukuumaddu ku gudbin doonaan warbixinta wax-qabadkooda iyo xilliga uu Madaxweynuhu soo saari doono isku shaan-dhayn uu doonayo in uu daaqadda kaga tuuro xubno badan oo xukuumaddiisa ka mid ah kuna soo cugto kuwo kale oo cusub.